အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ | Moep1's Blog
(နေပြည်တော် မတ် ၁၄၊ ၂၀၀၉)
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို မတ် ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားသည်။
လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ဒုတယ၀န်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်၊ ဦးစီးဌာနနှင့် လုပ်ငန်းများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ တည်ဆောက်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများမှ စက်ရုံမှူးများ တက်ရောက်ကြသည်။
လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးက အမှာစကားပြောကြားပြီး တည်ဆောက်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး များက ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တစ်ခုချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း များ၏ အသေးစိတ် အစီအစဉ်များကိုလည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ရရှိမှုနှင့် လိုအပ်ချက်များကိုလည်းကောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများမှ စက်ရုံမှူးများက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု နှင့် စက်စွမ်းအားပြည့် ထုတ်လုပ်မည့် အစီအစဉ်များကိုလည်းကောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြား ရေးမှူးများက ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်း တင်ပြကြရာ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းက လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းမှာကြားပြီး နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြားကာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်း လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
This entry was posted on Sunday, March 15th, 2009 at 5:30 am and is filed under အထွေထွေ (General News).	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.